विचार/ दृष्टीकोण – nepakhabar
Category: विचार/ दृष्टीकोण
कंगोमा विकास निर्माणमा व्यस्त नेपाली सेना
दीपराज सन्याल बुनिया, कंगो । १९ साउन नेपाली सेना स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न छ भन्ने के तपाईंलाई थाहा छ ? हो, द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा तैनाथ नेपाली सेनाको इन्जिनियर गुल्मले एक वर्षको अवधिमा कंगोमा विभिन्न ठूला–साना निर्माण परियोजना सुरु गरेको छ । गुल्मले सुरु गरेको तीनवटा महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये […]
तिजमा रक्सी पिउनै पर्छ र ?
‘माइती गाउँमा पुगेर आफ्नो आर्थिक औकात देखाउन राम्रा कपडा र गहना लगाउने पुरानै चलन हो । त्यतिवेला औकात देखाउन राम्रा लुगा तथा गहनाको सहारा लिनुपथ्र्यो तर सूचना तथा प्रविधिको अहिलेको युगमा राम्रा लुगा तथा गहनाले औकात देखिने होइन । त्यतिवेला मीठा मसिना खाने कुराहरू थोरै थिए, अहिले धेरै छन् । तर, धेरै छन् भन्दैमा महिनौसम्म […]
भरतमोहन अधिकारीको अष्टावक्र मनोव्यक्तित्व
मनको रोग भयानक हुन्छ । मनोव्यक्तित्व अतिसंकीर्ण हुँदा आकाशलाई कुवाको आयतनभन्दा बढी देखिँदैन । ‘सागर त गागरमा’ अटाउँदैन । शरीर बाङ्गो भए पनि मन, चेतना, ज्ञान र बुद्धि बांगिएका अष्टावक्र उदात्त चेतना हुन् भने धेरै जाती कुरा हो । तर, पूर्व एमाले केही नेताहरूको मन भने बाङ्गिएको देख्दा अचम्म लागेको छ । तिनका लोली र […]